Eczema (နှင်းခူ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Eczema (နှင်းခူ)
Eczema (နှင်းခူ) ကဘာလဲ။
ပြဿနာ နှင့် ရှာဖွေမှု
ရေးသားသူ Dr. Thiha Phyo Myint ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. K Zin Thwe
နှင်းခူဆိုတာ အရေပြားရောင်ရမ်းတဲ့ ရောဂါတမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။အတိအကျပြောရရင် နှင်းခူဟာ အရေပြားကို ယားယံ၊နီရဲ၊ခြောက်သွေ့စေပြီး အက်ကွဲခြင်း၊သားရေပြားလို မာခေါက်ခေါက်ဖြစ်ခြင်းမျိုးကိုတောင် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နှင်းခူဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာမဆို ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
Eczema (နှင်းခူ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ။
အရေပြားထိခိုက်စေတဲ့ အရာတွေနဲ့ ထိတွေ့မိခြင်း
အပူ နဲ့ ချွေးထွက်များခြင်း
အေးပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ ရာသီဥတု။
ဘယ်သူတွေမှာ နှင်းခူဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများသလဲ။
နှင်းခူဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများစေတဲ့ အချက်တွေကတော့
မိသားစုထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အရင်က နှင်းခူ၊ဓာတ်မတည့်တာ၊ နဲ့ ပန်းနာရင်ကျပ် ဖြစ်ဖူးတာ။
ကိုယ်တိုင်က ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဖြစ်နေတာ စတဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေမှာ နှင်းခူပိုဖြစ်စေတဲ့ အချက်တွေက
မိဘတွေရဲ့ ပညာအရည်အချင်း မြင့်မားတာ။
attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) အတက်ကြွလွန်အာရုံမစူးစိုက်နိုင်သော ရောဂါတမျိုးရှိတာ။
Eczema (နှင်းခူ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
နှင်းခူရဲ့ အတွေ့ရအများဆုံး လက္ခဏာတွေကတော့
ကာလကြာရှည် အရေပြားယားယံ၊ခြောက်သွေ့ပြီး မာနေ၊ထူနေတာ (အထူးသဖြင့် လက်၊လည်ပင်း၊မျက်နှာ နဲ့ ခြေထောက်တွေမှာ ဖြစ်ပွါးလေ့ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာမဆို ဖြစ်ပွါးနိုင်ပါတယ်)။ကလေးတွေမှာဆိုရင် ဒူးခေါက်ခွက်နဲ့ လက်မောင်းကွေးအခွက်တွေမှာ အဓိက ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
ယားလို့ကုတ်ရင် ခြောက်နေတဲ့ အရေပြားနေရာတွေဟာ အနာဖြစ်သွားပြီး ပိုးပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။
နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်လွန်းတဲ့အတွက် ညညအိပ်မခြင်း ဒါမှမဟုတ် နေ့စဉ်ပုံမှန် လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေကို ကောင်းကောင်း မလုပ်နိုင်ခြင်း။
အရေပြား ပိုးဝင်သော လက္ခဏာတွေရှိခြင်း။ (အနီစက်တွေ၊ပြည်တွေ၊အဝါရောင်အနာဖေးတွေ ဖြစ်လာတာ)။
အိမ်မှာ မိမိဖာသာ ကုသကြည့်သေးပေမယ့် မသက်သာခြင်း။
အထက်ပါ အခြေအနေမျိုးတွေရှိရင် ဆေးဝါးကုသမှုခံယူဖို့ လိုပါတယ်။
နှင်းခူရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေက ဘာတွေလဲ။
ပန်းနာရင်ကျပ်၊ ဓါတ်မတည့်ရောဂါ၊ ကာလရှည် ယားယံတာ၊ အရေပြားမှာ အကြေးခွံလို အကွက်တွေဖြစ်တာ၊အရေပြားမှာ ပိုးဝင်ပြီး အနာတွေလို ဖြစ်တာ၊မျက်စိပြဿနာတွေ ခံစားရတာ၊လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ လက်ချောင်းကြားတွေထဲမှာ အနာလေးတွေ ဖြစ်တာ၊အိပ်မပျော်တာ၊အမူအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ပေါ်လာတာ စတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
သင့်အရေပြားကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးတာ၊ရောဂါလက္ခဏာတွေကို မေးမြန်းစူးစမ်းတာတွေကတဆင့် နှင်းခူရောဂါကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။တခြား အရေပြားရောဂါတွေ ဒါမှမဟုတ် နှင်းခူနဲ့ တွဲပြီးဖြစ်တတ်တဲ့ အရေပြားပြဿနာတွေ ရှိမရှိ သိနိုင်ဖို့အတွက် တခြားလိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်း သင့်ဆရာဝန်က ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
နှင်းခူကို ကုသရာမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ ဆေးတွေက
စတီးရွိုက် ဆေးတွေ စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပတ်တီးအစို စည်းပေးခြင်း ။ ဒါဟာ ပြင်းထန်စွာ အရေပြားရောင်ရမ်းမှုအတွက် အကျိုးရှိထိရောက်တဲ့ ကုသမှုနည်းလမ်းတခု ဖြစ်ပြီး ရောဂါဖြစ်ပွါးနေတဲ့ အရေပြားနေရာကို စတီးရွိုက်လိမ်းဆေးတွေ၊ ပတ်တီးအစိုတွေနဲ့ ပတ်ပြီးထုတ်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အလင်းနဲ့ကုသခြင်း ။ အရိုးရှင်းဆုံးနည်းကတော့ နေရောင်ပြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အလင်းပြတဲ့ နည်းလမ်းဟာ အရေပြားကင်ဆာဖြစ်ပွါးနှုန်းကို မြင့်မားစေနိုင်တာမို့ မွေးကင်းစတွေနဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့ ကလေးတွေမှာ အသုံးမပြုပါဘူး။
စိတ်ဖိစီးမှုတွေအတွက် ကုသပေးခြင်း ။ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပညာပေးတာကို ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် နှင်းခူဖြစ်လို့ အရမ်းရှက်နေ၊မချင့်မရဲ ဖြစ်နေတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေးတွေကို စိတ်သက်သာရာရစေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကိုဖြေလျှော့ထားဖို့၊အမူအကျင့်တွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေခြင်း ။ တချိန်လုံးကုတ်နေတတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးကို ဖျောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါအချက်လေးတွေကို လိုက်နာရင် နှင်းခူဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့နည်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။
ဓာတ်မတည့်တာ ဒါမှမဟုတ် ယားယံတာ ပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ သောက်ဆေးတွေကို သောက်ပါ။
အရေပြားအတွက် အကျိုးရှိစေတဲ့ ဓာတုဗေဒဆေးရည်တွေနဲ့ ရေချိုးပါ။
နှင်းခူဖြစ်နေတဲ့နေရာကို ယားယံတာသက်သာစေတဲ့ ခရင်မ် ဒါမှမဟုတ် ကလမင်း လိမ်းဆေး (calamine) ကို လိမ်းပါ။
သင့်ရဲ့ အရေပြားကို အနည်းဆုံး တနေ့နှစ်ကြိမ်လောက် အစိုဓာတ်ရအောင် ပြုလုပ်ပေးပါ။
အေးမြစိုစွတ်တဲ့ အဝတ်လေးတွေနဲ့ ဖိကပ်ထားပါ။
ဆိုးဆေးတွေ၊အနံ့တွေ မပါတဲ့ ဆပ်ပြာအပျော့စားတွေကို ရွေးချယ်အသုံးပြုပါ။
ရေငွေ့စက် လို့ခေါ်တဲ့ လေထုကို အစိုဓာတ်ရအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ စက်ကလေးတွေကို အသုံးပြုပါ။
အေးမြ၊နူးညံ့တဲ့ ချည်ထည်လေးတွေကိုပဲ ဝတ်ဆင်ပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင့်ကြများတာတွေကို ဖြေလျော့ပါ။
September4th , 2016.
http://www.medicalnewstoday.com/articles/14417.php. Accessed September4th , 2016.
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/eczema/basics/definition/con-20032073. Accessed September4th , 2016.
https://medlineplus.gov/eczema.html. Accessed September4th , 2016.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတျ 2, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတျ 13, 2017